Ataovy laharam-pahamehana ny personalization | Martech Zone
Ataovy laharam-pahamehana ny personalization
Alarobia, Jona 11, 2014 Alarobia, Jona 11, 2014 Douglas Karr
Amin'ity herinandro ity Edge of the Web Fampisehoana amin'ny radio sy podcast, miresaka momba ny varotra an-tserasera izahay ary ny fepetra tokony hataon'ny orinasa hanatsarana ny varotra an-tserasera. Tamin'ny sary vao haingana nozarainay, Ny andraikitry ny data amin'ny làlan'ny fividianana an-tserasera, nisy vitsivitsy ihany momba ny personalization sy ny fampitomboany ny fisokafana, tsindry ary ny fanovana avy amin'ny fampielezana mailaka. Saingy tsy tokony hoferana amin'ny fandefasana mailaka fotsiny izany, ny personalization dia tokony haparitaka manodidina ny traikefa an-tserasera an-tserasera.
Ny fanaovana personalization dia tsy paikady hitsapana fotsiny fa paikady voaporofo isaky ny mandeha ny fotoana hampitomboana ny varotra. Ity infographic avy amin'ny Sq1, maso ivoho misahana manokana ny fanatsarana ny fiovam-po, dia miorina amin'ny whitepaper izay novolavolain'izy ireo Ataovy laharam-pahamehana ny personalization.
Amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny tolo-kevitry ny vokatra hampiasana ny fotoana rehetra azo amidy sy fivarotana ary ny fanamboarana ny tolotra / fandefasana hafatra mifototra amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa, ny mpivarotra dia afaka manamboatra tetezana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa. Izy ireo dia afaka mampitombo ny isan'ny entana amidy ary mampitombo ny tsy fivadihana maharitra. Ny porofo dia ao amin'ireo isa. Manakaiky ny 60% ny mpivarotra no niaina ROI nitombo rehefa namboarin'izy ireo manokana ny fivarotana an-tserasera.
Tokony hamboarinao manokana na aiza na aiza azonao ampidirina:
Mailaka opt-in mitondra ny tranokalanao
Mailaka transaction izay manolotra vokatra mifameno miaraka amin'ny tapakila fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny mailaka fanamafisana
Ny personalization dia tokony hisy fiantraikany amin'ny safidinao fitetezana, pejy fitaterana ary sarety fiantsenana ao amin'ny tranonkalanao
Mamorona pejy fiakarana ho an'ny fampiroboroboana ary avereno ny mpanjifa rehefa miditra
Lisitra faniriana; ataovy mora amin'ny mpanjifa ny miverina haingana amin'ny vokatra tadiavin'izy ireo
Tags: mailaka fanamafisanafiovam-pofanavaozana fiovam-potapakilafitadiavana mpanjifamampiseho dokapejy pejylanja mandritra ny androm-piainanaFikarohanamailaka opt-inpersonalizationtapakila fampiroboroboanafisondrotanaavereno mpanjifaavereno mividysarety fiantsenanasq1mailaka fifanakalozanamailaka transactionallisitra faniriana
Ny Andry 3 an'ny Marketing
Paikady fampiroboroboana bilaogy avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny varotra ambony